Wasaaradda Amniga oo sheegtay inay jiraan shaqsiyaad ku howlan fal dambiyeedyo ka dhan ah xasilloonida Koofur Galbeed | Burconews
Wasaaradda Amniga oo sheegtay inay jiraan shaqsiyaad ku howlan fal dambiyeedyo ka dhan ah xasilloonida Koofur Galbeed
November 26, 2018 - Written by Admin
muqdisho_Wasaaradda Amniga Gudaha ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaalada guud ee amniga Koofur Galbeed.
War saxaafadeed ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abukar Islow Ducaale oo loo diray Wasiirka amniga Koofur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa lagu sheegay inay jiraan shaqsiyaad ku howlan handadaada bulshada iyo fal dambiyeedyo ka dhan ah xasilloonida iyo degenaanshaha dowlad goboleedka Koofur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in sugida amniga Koofur Galbeed uu muhiim u yahay amniga Qaranka Soomaaliyeed.
Laguma sheegin qoraalka shaqsiyaadka handadaada iyo khal khal gelinta ka wada Baydhabo, waxaase qoraalka u muuqdaa mid dadban oo siyaasadeysan, iyadoo horay dowladda Federaalka loogu eedeeyay inay faragelin ku heyso Koofur Galbeed iyo arrimaha doorashooyinka.
Wasaaradda Amniga ayaa horay qoraal uga soo saartay Mukhtaar Roobow in aanu u tartami karin doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed, inkastoo go’aankaas lagu gacan seyray, iyadoo Mukhtaar Roobow haatan ka mid yahay Musharaxiinta la siiyay Shahaadada aqoonsiga.